rudo & Sex
Last updated: Chivabvu. 19 2018 | 2 Maminitsi verenga
Paiva nenguva apo iwe murume wako kana shamwari mukomana chete vasingagoni kuchengeta maoko kure mumwe, asi zvino zvinhu zvachinja uye imi kashoma sokuti kuita rudo. Izvi kufanana mamiriro ezvinhu uri pari? Kuti vave nechokwadi kuti imi unakirwe sezvaunoita anoshandiswa kuva nomumwe wenyu ambotaurwa, kudzidza kuchikutadzisa kumunetsawo rudo.
Ita ambiance yakakwana
Vakaroorana vakawanda mumazuva ukama hwavo vepakutanga chete vanoda muchihwande pakona yakarova akakwana rudo rokuita kumunetsawo. zvisinei, sezvo ukama achikura, anotanga kurasikirwa runako payo kamwe kushandiswa nhaka. Kuva nekodzero ambiance kunogona kubatsira vanhu ivavo kupinda chinja rudo nyore.
Unogona kuedza kuburikidza dimming magetsi wako yokurara uye vachiisa vamwe kudanana mimhanzi. Iva nechokwadi mubhedha wako hakusi dhiraivhi; vanhu vakawanda chete havagoni kunzwa kudanana muna sviba zvinokukanganisa. Musarega yenyu yokurara kuti zvakare inopisa kana kutonhora sezvo zvose zvinogona kuva turnoffs pakarepo. Kana iwe une mhepo kutonhodza kana kudziyisa hurongwa yakaiswa, kurigadziridza. Matangiro kana mahwindo kuvhara kunogona kukubatsira normalizing tembiricha yako yokurara uye kuti nzvimbo yakakodzera yokuitira kuwana unodziya.
Stress ndechimwe chezvinhu zvinowanzokonzera zvinokonzera kuderedzwa zvepabonde nemotokari. Recently kuwana nhamba zvinoratidza kuti kumativi 15% varume vane yakaderera libido zvikurukuru nemhaka kunetseka vaine muupenyu. Testosterone ndiye kemikari kuti anodzora zvepabonde nemotokari nevanhu. Sezvo munhu achikura (30 kana kupfuura), ake testosterone pamwero unotanga kuuya pasi; kushushikana zvinokonzera kugadzirwa cortisol uye zvinoderedza ake testosterone pamwero kunyange mberi. saka, murume kunetswa kutemeswa musoro kazhinji ane hwakaderera libido pane vamwe varume zera rake.
Kana uchida kudzosa sesasaradzi uye uchida kupinda ari kufara nokuti rudo sezvo nomuzvarirwo sezvo imi aisiita makore mashoma shure, uchava kuwana nzira kuuraya kunetseka nemudiwa wako yakatarisa uye panguva imwe chete kuti iwe de-akasimbisa. Zvakanakisa, unofanira kubatsira mumwe nomumwe kumudzorerazve kunzwa yokumboonana kuburikidza kurova kunetseka. Omupa kukwiza muviri uye mukumbire kuti adzokere nyasha, tora rinopisa yokugezera pamwe chete, gadzirira chisvusvuro pamwe chete, famba mubindu pashure kwemanheru; izvi zvose zvichakubatsira iwe nemumwe wako kuti unwind uye kupinda zvakakwana rudo rokuita kumunetsawo.
Ita chokwadi unonzwa seksikäs
To sokuti kuita rudo, unofanira kutanga kunzwa seksikäs. Kana iwe usiri nechivimbo chako nokuda kurema iwe yawana kare mashoma apfuura, edza yakarova yokurovedza muviri uye kurasikirwa zvimwe. Izvi zvichaita kuti uve nechivimbo Ungatanga achaita zvakare kunzwa seksikäs uye. Unogonawo kuedzawo kubuda lingerie itsva, asi iva nechokwadi chokuti uri wakasununguka mairi; izvi nokuti nyaradzo nderwedu Zvinokosha kuti kunzwa seksikäs.
Kuchikutadzisa kumunetsawo rudo, unofanira kuita zvinhu achabvisa kubhoekana kubva ukama hwako. Kamwe ukama wako hunonakidza, hauzovawani zvakaoma kupinda nepfungwa dzakanaka kuti rudo.
Ratidza Kuda Kwako Pasina Words
Mhando akati zvakanaka pavakati, “Kupfuura mashoko ose unofanira…
Kana kunobva shamwari, vabereki, Porn, kana Hollywood, isu tose tine ruzivo kwenhema…
rudo 7 Easy Matanho
Pakunyanya kuda ndechimwe chezvinhu mashiripiti manzwiro munyika. akazadzwa…